China Ummeli ocacisa iBT-9805 uMvelisi kunye noMthengisi | BGT
I-BT-9805 kukusebenza okuphezulu kunye ne-sorbitol esekwe yokucacisa iarhente enegama leekhemikhali le-DMDBS, yeyesithathu isizukulwana.
Ingasetyenziswa kwi-PP nakwi-LLDPE.
Ukucacisa uMmeli I-BT-9805yokusebenza okuphezulu kwe-sorbitol esekwe kwisizukulwana sesithathu (i-DMDBS) kwaye inokucutha inkungu kwaye inyuse ukucaca kwepolypropylene ngokusebenzisa i-nucleation yepolymer. Oku kukhokelela ekwandiseni ukunganyangeki kobushushu, ukuphucula ukuqina kwenxalenye ebunjiweyo kunye nexesha elifutshane lokujikeleza ngexesha lenkqubo yokubumba. Ayinavumba kwaye ilungile kwizicelo zonxibelelwano zokutya. Olu hlobo lweemveliso zefomula yolwakhiwo ivunyiwe yi-FDA evumelekileyo kusetyenziswa kunxibelelwano lokutya emhlabeni kwimarike.
Ukucacisa uMmeli I-BT-9805 Ingasetyenziselwa ukuvelisa izinto zeMask, inokuthi:
Ukuphucula ukucaca kwePP.
Ukuphucula ukukhanya kwe-PP.
Ukuphucula ubulukhuni, ukumelana nefuthe le-melt-blown-fabric.
Ukuphucula isalathiso sokunyibilika ukuhlangabezana neemfuno zelaphu elinyibilikisiweyo.
Sebenzisa I-BT-9805, Abasebenzisi banokuhambisa ngokuthe ngqo kwizinto ze-PP zokuvelisa iimveliso ezigqityiweyo, i-masterbatch ebonakalayo kunye ne-PP ecacisiweyo. Zininzi iimveliso ezinokuveliswa kubandakanya izinto zasendlini, iimeko zokugcina, iimeko zehenjisi eziphilayo, izikhongozeli zodonga olucekeceke kunye neesirinji ezilahlwayo kunye nokucacisa iibhotile ezibunjiweyo zepolypropylene zamayeza, iziqholo, iijusi, iisosi, iivithamini kunye neebhotile zabantwana njl.
10 kg / ingxowa
Egqithileyo Ukucacisa iAgent BT-9803M
Okulandelayo: Ukucacisa iAgent BT-9803
Ukucacisa uMmeli ovela eTshayina
Ukucacisa uMenzi weAgent
Ummeli ocacisa i-PP
I-Sorbitol esekwe yokuCacisa uMmeli